That's so good, right?: Help! (Part Two)
Posted by Alex Aung at 7:19 PM
♡ My Husband's Lover ♥
သူ့အကြောင်း ဖျတ်ခနဲအတွေးမှာ ကျွန်တော့် ကျဆုံးခန်းစတင်တော့တာပဲ ... သူ့လက်ဖ၀ါးထဲက နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ ကျွန်းကလေးက ...
Boyhood Sex Memories (Part Four)
ငယ်ရွယ်နုပျို ခြင်းရဲ့ အမှတ်သညာတွေဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ကိစ္စ အတွေ့အကြုံ တွေဖြစ်နေရုံသက်သက်ပါ။ ဘော်ဒါတို့ကော ဘာတွေ မှတ်မိကြပါသလဲ။ (၁) ချာလီ ...
“ မျဉ်းဖြောင့်များရဲ့ ကမ္ဘာ”
“ကိုဘတင့် ဧည့်သည်လာတယ်” ရှေ့ဆီမှ အော်လိုက်တဲ့ အသံကြောင့် အတိတ်ရဲ့ အရိပ်တွေကို ပြန်ဖော်ရင်းအလုပ်ရှုပ်သွားမိတယ်။ ဘယ်သူများပါလဲ။ ကျုပ်ဆ...